Hambada Reer Karbala(Isaaq) Ayaa ku Hurda Dhabta Rayaale.Kulmiyana waa Nazi « CEELBARDAALENEWS.COM
« Digniin Ku Socota Bakipress.com
Shirar Gabiley ka dhacay iyo Go,aamo Isburinaya oo soo Yeedhaya. »
Hambada Reer Karbala(Isaaq) Ayaa ku Hurda Dhabta Rayaale.Kulmiyana waa Nazi
Posted by Admin on October 21, 2009
Hargeysa:Suldaan Maxamed Cabdilaahi Xuseen (Gallaal), oo ka mid ah salaadiinta Gobolka Hargeysa ayaa caawa xisbiga mucaaridka ah ee KULMIYE ku sifeeyay mid la mid ah xisbigii Naasiga ee Hitlar, waxaanu sheegay in haddii uu xisbigaasi uu ku guulaysto doorashada Madaxtooyada inuu dalka ka dhici doono dagaal sokeeye.
Suldaan Galaal wuxuu sidaasi ku sheegay mar uu caawa la soo xidhiidhay shabakada wararka ee Ramaas News, oo uu sheegay inuu fariin u gudbinayo shacbiga. Waxaanu xisbiga KULMIYE ku eedeeyay inay ku jiraan koox uu xusay inay dalka ka rideen dagaalkii sokeeye ee dalka ka dhacay 1994-kii illaa 1996-kii, waxaanu yidhi “Adeer Caawa waxaan halkan idiinku imid inaan idiin sheego arrrin aan doonayo inaan gudbiyo, Ilaahay mahadii dalkii wuu qaboobay oo roobkii wuu inoo shubay, xisbiyadiina way heshiiyeen markii lix qodob dalka dibadiisa la inooga soo yeedhiyay. Anigu waxaan sheegayaa wax aan dad badan u muuqan, waxani ma aha wax aan fidno hurida ku kicinayo ee waa wax aan u sheegayo dadka inta aan waxba la socon. Waxa ii muuqata in dalka halisi ay ku soo socoto oo ay arrintu ay ka weyn tahay xisbiyo is haysta iyo UDUB oo kordhisanaysa’e waxa weeyaan qoladeenan reer Karbala (Isaaqa) dhexdiisa waxaynu nahay dad isu yimid oo biyaha wada cabayee siyaasiyan looma heshiin dagaal xun oo sokeeye ayaa dhacay. Dagaalkaasi waxaan leeyahay ma aanu heshiin dadkii aanu is dilaynay saaxiibadaydii kale ee Kornayladdiina waa kuwan hanjabaya ee leh dhangad ayaanu kaga soo saaraynaa madaxtooyada wadaadkan (Madaxweynaha) ah jimciyada quruumaha ka dhaxaysa ee aynu biyahaba isaga ku wada cabno. Anigu badow baan ahay oo xisbiyo iyo waxba ma aqaano ee qabaa’il is dilay ayaan aqaanaa oo la heshiisiinayo.”
Suldaanku wuxuu sheegay in xataa KULMIYE haddii uu ku yimaado sifo sharci ah aanay yeelaynin, waxaanu yidhi “Xataa haddii ay sharciyan ku yimaadaan xisbiga aan tilmaamayo ee aan garanayaa ee Xisbiga KULMIYE Siilaanyo waa siyaasigeenii waa inaadeerkay habarjeclo waa reer qiimo badan nagu leh anaga oo aan jeclahay. Xisbigaasi wuxuu u eg yahay xisbigii Naasiga ee Hitler, canaasiir baa ku jirta doonaysa inay xukunka markay qabsadaan dagaalka bilaabaan. Waxaabihii berigii dhawayd la doonayay in la adeegsado Xildhibaano ee mooshinka maamuus ka xayuubinta ahaa waxba kama jiraan.”
“Xisbiga UDUB ee uu ka tagay Marxuum- Cigaal ayaa la iskugu tagay ee imika Madaxweyne Rayaale taladiisa uu hayo, kuwa aan ka hadlayo (KULMIYE) ee aanu isugu daran nahay ee aan leeyahay diyaar baan idiin ahay haddii aad timaadaan waxaanu ku kala badbaadi karnaa xisbigan UDUB oo yimaada.
Xisbigan Faysal Cali Waraabe UCID waa xisbi cusub ninka taageerayaa isagay jirtaa, laakiin ma aqbalayo KULMIYE mana aqaano sharci ee xukunka haddii uu qabsado dagaal baa dhacaya.,”ayuu yidhi Suldaan Maxamed Cabdilaahi, waxaanu intaasi ku daray “Intii yarayd ayay kala fadhiisatay, hanbada yar ee reer Karbala (Isaaqa) uma ogoli dagaal dambe in la heshiisiiyo mooyaane’e, marxaladu waxay maraysaa halkii 1994-kii oo kale. Anigu nin laaluush qaate ah ma ihi haddii aan Gallaal ahay waxaan shacbiga leeyahay haddii KULMIYE soo baxo dagaal baa dhacaya.”
Markii uu farriintiisaasi dhameeyay waxay Weriyaha Shabakada wararka ee Ramaas News ee Somaliland Cumar Maxamed Faarax, uu weydiiyay Suldaankan su’aalo u dhacay sidan:-
S: Suldaan Xisbi qaran oo sifo sharci ah ku dhisan, ayaad xisbigii Naasiga ku sifeysay, arrimahan aad ka hadlaysana waa laga soo gudbay oo dagaalkii sokeeye waa laga heshiiyay, waa maxay waxan ku soo kiciyay?
J: Waxaan sidaas adag ugu cabiray xisbiga KULMIYE, Siilaanyo waa siyaasigayagii oo waanu ixtiraamnaa, laakiin wuxuu dhufays u noqday meeshii iyo cidii aanu dagaalkii sokeeye u aanaynaynay ee riday ee aanu caddaanka u hayno. Dadka leh waxba la soo dhaafay waa carruur aan waxba ogayn.
S: Dad badan oo aan dagaal ridin ayaa ku jira KULMIYE oo shakhsiyaadka aad eedaynaysana aan ahayn waayo kuwa aad sida gaarka ah u eedaynaysaa?
J: Shakhsiyaad la isla yaqaano weeye, Anaga rag badan ayaa (Garxajis) ahaan nagaga jira KULMIYE, laakiin waxa weeye adeer Isaaq dagaalkii ka dib muu heshiin markaa xisbi hirgeli karaa oo aan ahayn UDUB ma jiro. Xisbigani wuu calaamadsan yahay. Waxaan ka turjumayaa shucuurta beesha Garxajis-ka?
S: Waxaad ahayd Suldaankii xiligaasi aad sheegayso dagaalkii sokeeye ka soo shaqeeyay nabada ee habeen madow soo raray maleeshiyadii beeshiisa Hargeysa keenay, maanta oo ay ka dambaysay dhawr iyo toban sano miyaan la is odhan karin Suldaanku ma aha kii hore?
J: Ta aan dhaliyay ee aan ilaalinayaa waa tan (Somaliland), laakiin anigu kooxdii aanu is dilay ee macruufka ahayd ma aanu heshiin ama calan ha sameystaan ama xisbiye’e. waxaan ogahay in haddii aan laga hortagin uu dagaal sokeeye dhacayo maadaama xubnihii firfircoonaa ee dagaalka riday ay hanjabayaan. Umma olalaynayo UDUB laakiin badbaadada dadkan magaca Isaaq sheeganaya siday ku bad baadayaan ayaan wadaa.
Rayaale beesha reer Karbala (Isaaqa) dhabtooda kuma jiifo ee iyagaa dhabtiisa ku jiifa oo is baday waana u buste ay dhaxanta ka galeen. Anigu tallada aan bixinayaa waxa weeye haddii uu kaasi (Madaxweynuhu) meesha ka tago waa la is cunayaa.
This entry was posted on October 21, 2009 at 12:30 pm	and is filed under 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.